विश्वका यी देशमा खुल्दैछ लकडाउन ? «
प्रकाशित मिति : बैशाख ३, २०७७ बुधबार
कोरोनाभाइरसले विश्वभरीमा १ लाख १९ हजार ७२९ मानिसको ज्यान गएको छ । तर विश्वका केही मुलुकहरुले कोरोनाभाइरसको विस्तार रोक्नका लागि लगाएको लकडाउन खोल्ने तयारी गरिरहेका छन् । प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने मुलुकहरुमा धेरैजसोले बाँकि देशको तुलनामा लकडाउन पहिला घोषणा गरेका थिए । यी मुलुकमा महामारीले बाँकि युरोपको तुलनामा कम मात्रै विनासकारी रुप लिएको छ । यसैले यी मुलुकहरुले विस्तारै–विस्तारै लकडाउन खोल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
यो मुलुकमा साइकल स्टोर, टेनिस, स्वीमिङ पुल खोलिने भएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयलाई लिएर मानिसहरु उत्साहित भएका छन् । उनीहरुले सिस्टम राम्रो भएको बताएका छन् । मानिसहरुले जिम्मेवारीका साथ आफ्नो काम गरिरहेका छन् । मानिसहरुलाई मंगलबारदेखि बिना मास्क व्यायाम गर्ने अनुमती दिइएको छ । कुनै पनि खेलकूदमा २ भन्दा बढी मानिस एकैठाउँमा बस्न पाउदैनन् र उनीहरु शावर र लकरको प्रयोग गर्न पाउदैनन् । यहाँ बाहिरको भ्रमणको अनुमती पनि दिइएको छ ।
यदी अवस्था स्थिर रहेमा डेनमार्कम किन्डरगार्डेन स्कूल खुल्ने छ । तर धेरैजसो प्रतिबन्ध लागू रहनेछ ।
यद्यपि चरणबद्ध रुपमा यसलाई खुकुलो पारिनेछ । १० मे सम्म १० भन्दा बढी मानिसलाई भेला हुनबाट रोकिएको छ । चर्च, सिनेमा हल र शपिङ सेन्टर बन्द रहने छ । अगस्टसम्म चाडपर्व वा भोज भत्तेरको आयाोजनामा रोक लगाइएको छ । यहाँ सीमा पनि बन्द रहनेछ ।
नर्वेमा २० अप्रिलपछि केजी स्कूल खुल्ने भएका छन् । यसपछि कक्षा ४ सम्म खुला गरिने छ । युरोपका डब्लूएचओका क्षेत्रिय निर्देशक डा. हान्स क्लूगले युरोपको अवस्था चिन्ताजनक भएको र अझै प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने समय आइनसकेको बताएका छन् । युरोप यो महामारीको इपिसेन्टरको रुपमा रहदै आएको छ । विश्वभरीका सर्वाधिक प्रभावित १० देशमा ७ युरोपका रहेका छन् ।
साना पसल, हाहर्डवेयर तथा गार्डन स्टोर खोलिने भएको छ । सुपरमार्केट र सार्वजनिक यातायातमा मानिसले मास्क लगाउनु पर्नेछ । १ मे देखि शपिङ सेन्टर तथा शैलुन खुल्ने भएका छन् । मे महिनाको मध्यदेखि रेष्टुँरा तथा होटल खुल्ने छन् ।
स्वीट्जरल्यान्डमा २६ अप्रिलसम्म सामाजिक दुरीका लागि लगाइएको प्रतिबन्ध जारी रहने छ । तर, यसपछि सीमा, स्कूल खोल्ने विषयमा विचार गर्न सकिने बताइएको छ । यदी भाइरस नियन्त्रणमा आयो भने मानिसलाई भेला हुने अनुमती दिन सकिन्छ ।
युरोपमा इटालीपछि सर्वाधिक मृत्यू भएको स्पेनमा मानिस काममा फर्कन थालेका छन् । प्रहरीले यातायात केन्द्रमा मानिसलाई दिइएको देखिएको छ । करीब ३,००,००० मानिसलाई काममा जाने अनुमती दिइएको छ । पसल, बजार र बार २६ अप्रिलसम्म बन्द रहने छ । यद्यपि यो पैmसलाको बिरोध गरिएको छ ।
अनुगमनबाट जफत गरिएको प्याज बिक्री